Xiaomi Redmi 6 Pro mitambo ye 5.84-inch yakazara HD (2280x1080p) skrini ne 2.5D girazi rakakomberedzwa kuratidza uye 19: 9 aspect ratio.KVN Rohit / IBTimes India
Xiaomi yakatanga rudzi rutsva Redmi 6 mutsara-rekupedzisira Redmi 6A, generic Redmi 6 uye Redmi 6 Pro-muIndia pamusana pemwedzi. Vanouya nekukwiridzirwa kukuru kwemashoko maererano nehupirwo uye hardware mukati mukati meRamimi 5 mutsara.
Ndanga ndichiri kushandisa iyo Redmi 6 Pro kwemavhiki anopfuura maviri uye ndinofanira kutaura, ndakada zvose zvese zvechigadziro-kuva yakagadzirirwa, kuvaka chimiro, hupenyu hwebheteri uye kamera yakakwirira.
Izvi ndizvo zvandiri kunzwa nezveiyo itsva Xiaomi foni.
Kuvaka unhu, kuronga uye kuratidza:
Iyo Redmi 6 Pro inouya neyakaomesika piritsi. Usanyengedzwa nemutengo, iganda remudziyo rakagadzirwa nesimbi yepamusoro-soro. Tinogona kuzvinzwa painobatwa neruoko uye takanyatsovimba inogona kutsigira madonhwe etsaona. Zvinogona kucherechedzwa kuti kambani inopawo silicone kumashure yekuvhara nehomwe, saka pane kaviri kuchengetedzwa kwefoni. Unogona kututumadza mudziyo mukubwinya uzere pasina chifukidziro, asi ndapota kurairwa, kana ukadonha kubva pamitunhu mirefu senge pakureba muhomwe, inogona kutambura dents, asi inonyatso kudzivirira iyo yemukati yemahara. Asi, kana iwe ukakanda iyo nechiratidziro yakatarisana nevhu, inogona kupunzika saka ive shuwa yekuve nechengetedzo yegirazi zviri nani girazi rakatsamwa.
Iro Redmi 6 Pro mitambo inonyatsooneka iPhone X-kufanana nekugadzirwa, ine ye-uni-brow notch pamusoro pekuratidzira uyewo iyo yakafanana yakagadzirirwa ne-kamera pamusoro wekona yepamusoro. Ndinoda chifukidzo chegirazi che 2.5D pamusoro pechiso, sezvo ichikwira kumiganhu ichiita unibody design.
Ndinokoshesa basa repende, sezvinonzi polycarbonate-based caps kumusoro nechepasi pasi pedhi-nechemberi inobatanidza zvakanaka nehombe yesimbi mukati.
Xiaomi mitambo yesimbi metal kumusana uye maviri-kamera kumusoro kwekona yekona. KVN Rohit / IBTimes India
Xiaomi Redmi 6 Pro inouya ne two speakers grilles uye microUSB port pazasi.KVN Rohit / IBTimes India
Xiaomi Redmi 6 Pro yakawanda rockers uye simba rekona yakaiswa kune rimwe pamusoro peimwe kurutivi rworudyi rwemucheto.KVN Rohit / IBTimes India
Xiaomi Redmi 6 Pro inouya ne 3.5mm audio jack, mic na IR blaster kumusoro kwepamusoro. KVN Rohit / IBTimes India
Sekureva kwechiratidziro, chakajeka uye chine simba. Maziso angu haana kumbonzwa kunetsekana ndichiona zvemukati muzuva rakananga. Kutenda ku19: 9 factor ratio, unogona kunakidzwa nesinema yekuona chiitiko. Kana iwe usingade notch, iwe unogona kuiviga nekuenda kune iyo Zvirongwa >> Yakazara-skrini kuratidza >> Viga skrini notch.
Xiaomi Redmi 6 Pro inouya nenguva-yakaedzwa Qualcomm Snapdragon 625 octa-core. Hongu, Xiaomi yakashandisa chipset chimwe chete mune dzakawanda Redmi nhare dzinoteedzera, asi chokwadi kuti chiudzwa, processor yacho inonyanya kunaka mukirasi yayo uye zvakare ine simba zvikuru kumutengo unorayirwa nemudziyo. Kune mafoni mumusika weIndia ane Snapdragon 425 inodhura kudarika maRs 16,000. Neichi chikonzero, ini kuyera iyo Redmi 6 Pro seyakanakisa mukirasi yayo.
Inouya mune maviri ekurongedza- 3GB RAM + 32GB kuchengetedza uye 4GB RAM + 64GB kuchengetedza. Mhando dzose dziri mbiri dzinouya neyakawedzera kusarudzika uye zvandiri kuda nezveizvi kuti, kambani iri kupa yakatsaurwa microSD kadhi slot kuwedzera maviri eSIM slots, izvo mamwe makambani haawanzo kupa.
Munguva yekuedzwa, Redmi 6 Pro haina kuratidza chiratidzo chechig-ness panguva yekuvhura kwema-apps, kutakurwa kwekhamera uye pachitamba mitambo. Yakashanda zvakajeka uye haina kumbobvira yakanyanyisa kupfuura kwandinonyaradza pasi nguva yose yandishandisa.
Kana iri seyese mushandisi-interface interface ine hanya, inoenderana zvakanyanya, sevanhu vane zvakasiyana zvinofarira. Kuenzaniswa nemamwe matunhu epasi rose, vatengi vemuIndia havane hanya neyakagadziriswa yeiyo OS OS. Vanhu vakanyanya seni vanoda akachena Android uye tech vatsoropodzi vanoongorora mafoni mazhinji, vanofanirwa kugara vachifambisa-fambisa kuti vafambe kuburikidza nemadhizaini kuti gonesa / kudzima basa.
Ndakati, Ndinoda MIUI zvakanakisisa pakati pemutambo weIndaneti. Iyo inopa sarudzo yekuva nekwangwani chaiyo (kudzoka, kumba uye kumashure) ruzivo uyewo full-view screen nezviratidzo. Kunyangwe zvinononoka kusunungura hutsva hutsva, ndiyo chete yega inopa sangano rekushandisa kwemakore akawanda. Semuyenzaniso, MIUI 10, iyo inorongedzerwa kusunungurwa kuRedmi 6 series, iri kugadzirirwawo nemakore matatu ane makore Redmi Note 3. Saka, kana uri kuronga kutenga foni kwenguva refu yekushandisa, Redmi 6 Pro ndeye smart buy.
Uyewo, ndaida chaizvo Nyaya Yokuvhara Masoko muRedmi 6 Pro. Yakashanda nguva dzakawanda uye inofanira kutaura, yakanga iri neDeal Rejection Rate (FRR) yakaderera zvikuru yakaenzaniswa nedzimwe mhando dzepambani dzefoni dzandakaedza munguva dzino ichangopfuura. Iyo minwe yaive yakavimbika panguva yekuedzwa uye yakabvuma zvakananga kumubati wemunwe.
Xiaomi Redmi 6 Pro inouya ne 12MP + 5MP kaviri khamera neArtificial Intelligence (AI) Chirwere uye AI nzvimbo yekucherechedza. Neichi, foni yeXiaomi ichakwanisa kuona zviratidzo zvakasiyana-siyana zvakadai semhuka dzemhuka, maruva, chiso chemunhu, nzvimbo, mazaya echando, usiku, zvokudya nezvimwe.
Pamberi payo, inoshandisa sensor 5MP neAI Portrait mode, iyo pasinei nokuti ine lense imwe chete, inogona kutora selfies neBokeh blur effect. Kutenda nekufambira mberi kwekamera software, vashandisi vanogona kugadzirisa kutarisa pamusana uye mberi.
Parizvino nezvemufananidzo wemifananidzo, iyo Redmi 6 Pro haisi pamusoro pemakwikwi mune iri sub-Rs 14,000 chikamu. Izvo zvakatora mimwe mifananidzo inoshamisa mune yakajeka mamiriro ezvinhu, sezvo iyo yakakwanisa kuchengetedza yepedyo-chaiyo yakasikwa ruvara rwechinyorwa uye ini ndinofunga, ingangove nekuda kweArtificial Intelligence (AI) -camera app. Izvo zvinonzi unoona mhando yechinyorwa, chingave ruva, munhu uye zvakare kumashure senge pamhenderekedzo, nzvimbo dzakakwirira uye kukwanisa kukwidziridza macamera emameseti kuti uwane mufananidzo unogoneka.
Kunyange usiku, zvakare, Redmi 6 Pro yakakwanisa kudonha mifananidzo yakaisvonaka, yakakodzera zvakakwana pamutengo inorayira.
Kana zviri zvemberi kamera ine chekuita, ini ndinofadzwa neiyo Portrait maitiro, sezvo yakakwanisa kunyatsosiyanisa kupatsanurwa kwepasi pechinyorwa uye kusanganisa kumashure. Iyo Runako maitiro zvakare yakanaka chaizvo, vatengi vanogona kugadzirisa kuoma uye ganda reganda; yakafanana neyakagadzirirwa ita kit; iyi ficha ichave inokwezva pakati pezvemagariro vezvematongerwo enyika savy vechidiki.
Xiaomi Redmi 6 Pro primary camera cameras taken in the eveningKVN Rohit / IBTimes India
Xiaomi Redmi 6 Pro primary camera cameras taken in the morningKVN Rohit / IBTimes India
Xiaomi Redmi 6 Pro primary camera cameras taken in the early morning.KVN Rohit / IBTimes India
Xiaomi Redmi 6 Pro primary camera cameras taken in the evening.KVN Rohit / IBTimes India
Xiaomi Redmi 6 Pro primary camera cameras taken in the morning with Bokeh effect.KVN Rohit / IBTimes India
Xiaomi Redmi 6 Pro primary camera cameras taken in the night.KVN Rohit / IBTimes India
Iyo Redmi 6 Pro inouya nebheteri ye4,000mAh. Ndinokutendai nemafungiro akaisvonaka eMIUI 9.6 software, iyo yero inotora imwe kwehafu nehafu yeupenyu hwebheteri nguva dzose nekushandiswa kwakasanganiswa. Ndakatarisa zvakawanda zvezvikwata paYouTube kuburikidza ne Wi-Fi, kutamba hafu yeawa yevideo yemavhidhiyo uye ndakatarisa kuburikidza neGoogle News uye ndakaita mamwe mabasa ezuva nezuva. Kana yakashandiswa nenzira yakakodzera Redmi 6 Pro ichapedza mazuva maviri nyore nyore.
Redia Xiaomi's Redmi inoteedzera akaisa mabhenji muchikamu chebhajeti kwenguva yakareba muIndia uye ikozvino, Redmi 6 Pro inoyera zviyero zvitsva nekamera uye kuvaka mhando. Kana iwe uchitsvaga foni bhajeti uye usingade kushandisa bhomba pairi, Redmi 6 Pro ndiyo yakanakisa-kune-mari foni mumusika.
Inoshamisa camera hardware
Upenyu hweteri hunogara kwenguva refu
Kutarisa kusvinura hupenyu hunoita hupenyu hunoenderana nehupe
Handina kuwana nyaya yakakomba kunonyunyutira kunze kwekuderera kwemahomwe mumusika. Asi, iye zvino kambani yakaita hukuru hukuru mukugadzirisa gap-zvinoda gap reR Redmi 6 Pro, sezvazviri ikozvino njerwa-uye-matope zvivako, pamwe chete.
Zvinyorwa zvitsva zve Xiaomi Redmi 6 Pro:
kuratidza 5.84-inch yakazara HD + (2280x1080p) skrini ne 2.5D girazi yakakomberedzwa
Kujeka: 500 nits
Kusiyana kwepakati: 1500: 1
Ratidza Gamut: 84% NTSC
Nhamba yechipimo: 19: 9 yakaenzana
Processor 14nm kirasi 64-bit 2GHZ Qualcomm Snapdragon 625 octa-core
chengetedzo 32GB / 64GB, + inowedzera kusvika ku256GB kuburikidza ne microSD card
Mhando mbiri dzekamera: 12MP (ine Sony IMX486 sensor, 1.25μm pikisi yemasikisi, PDAF, F2.2 kuzarura + 5MP (ine Samsung S5K5E8 sensor, 1.12μm pikisi yemasikisi, f / 2.2 kuzarura)
Pamberi: 5MP sensor neAI-Portrait mode, Zvakanaka
bhatiri 4,000mAh bateri
Wedzera-ons Dual-SIM, kutarisa kusvinura, minwe miviri, Bluetooth 4.2, Wi-Fi (802.11 a / b / g / n), GPS + GLONASS, inonzi infrared sensor
miganhu 149.33 × 71.68 × 8.75 mm
Colors Dema, Bhuruu, Ndarama, Rhete Ndarama uye Dzvuku
3GB RAM + 32GB kuchengetedza: Rs 10,999
4GB RAM + 64GB kuchengetedza: Rs 12,999
(Cherechedza: Mutengo wesumo. Iyo kambani inogona kuwedzera kana kuderera kweRupee kurwisa Dollar kuenderera mushure memwedzi miviri)